Alaabta Bonnet iyo Warshada - Shiinaha Bonnet Soosaarayaasha
Maaskarada isha xariirta ah
Maaskarada Indhaha Satin
Maaskarada Indhaha Velvet
Maro xariir ah oo daabacan
Maro Daabacaadda Badan
Kaska Barkinta xariirta ah
Kiis Barkimo Badan
Dharka hurdada ee POLY
Dharka hurdada xariirta ah
Barkimo xariir ah
Dharka hurdada ee xariirta ah
Naqshadaynta leopard print polys...
Warshada Naqshad Cusub Iibka Kulul...
51×76 cm cabirka Satin S...
Macquul ah Qiimaha Poly Pi...
Calaamadda Caadiga ah ee Jilicsan Bonnet Xariir hurdo dabool laba gees leh
Farqiga Xariirta Xariirta • Xariir laba-geesood leh oo 100% ah: Xariir habeenimo ee xariirta ahi waxay ka samaysan tahay 6A darajo 100% xariir ah bulberry. Waa siman, jilicsan, fudud, iyo neefsasho, taas oo ku habboon timahaaga iyo maqaarkaaga. Waxaan leenahay 16 mm, 19 mm, 22 mm, 25 mm. • Aad ugu habboon timahaaga: waxay yarayn kartaa jaahwareerka iyo timaha xidhashada habeenkii. Intaa waxaa dheer, aad bay ugu habboon tahay inaad timahaaga nadiifiso markaad wejigaaga dhaqayso, daryeelka maqaarka, qurxinta iyo nadiifinta gurigaaga. Doorashada hadiyadda ugu habboon ee haweenka ValentineR
Jumlada Custom 19mm,22mm,25mm100% Silk Bonnet
Sumada Jumlada Gaarka ah ee Laba-Lakabka ah ee Naqshadeeye Xariirta Habeenka Koofida Bonnet
Farqiga Xariirta Xariirta ah Marka jidhka bini'aadamku xidho daboolka habeenkii si uu u seexdo, sababtoo ah daboolka daboolka habeenkii, waxay yareyn kartaa luminta kulaylka madaxa (saddex meelood meel kulaylka jidhka bini'aadamka ayaa ka soo baxa timaha), ilaali heerkulka madaxa, iyo in xididdada dhiigga ee madaxu ay ku jiraan xaalad nasasho. Dhiiga socodka dhiigga oo ilaaliya waxay door ka qaadan kartaa horumarinta hurdada. Sababtoo ah heerkulka yara deggan, waxay sidoo kale si wax ku ool ah uga hortagi kartaa hargabka uu keeno hargabka n..
Walax dabiici ah oo jilicsan oo tayo sare leh oo tayo sare leh oo habeenkii xariirta ah
Duubabkan xariirta ah ee timaha xariirta ah waxaa ku yaal xargaha dheer ee dhabarka oo leh xarig laastikada ah iyo naqshad siman oo xagga hore ah. Waxay ka samaysan tahay kan ugu fiican 100% Fasalka 6A Xariir saafi ah oo bulberry ah oo miisaankeedu yahay 16mm,19 mm,22mm, si ay timahaaga uga ilaaliso waxyeelada habeenkii. Waxay ilaalisaa qoyaanka dabiiciga ah iyo dhalaalka timaha, jabsiga oo yaraada marka la seexanayo. Waxay ka hortagtaa luminta timaha waxayna caawisaa dib u koraan. Timahaaga waxa ay ka dhigtaa mid cusub oo soo toosa iyada oo aan lahayn madax sariireed. ● Qaabka: Koofiyadda Habeenka Xariirta ee caadiga ah oo leh Ribbons. E...
Naqshadaynta gaarka ah ee jilicsan ee jilicsan 100% xariir xariir ah
Jumlada Custom Satin Hair Bonnet Logo Haweenka Lakabka Lakabka Bonnets
Midabo kala duwan Midabo kala duwan. Waxaa jira midabyo badan oo laga dooran karo: madow, buluug navy, guduud, casaan, zircon buluug. Wax kasta oo dharka aad xidhato, waxaad la jaan qaadi kartaa midabyo qurux badan. Cabbirka: cabbirku waa la hagaajin karaa. Xaaladaha caadiga ah, dhexroorku wuxuu ku dhow yahay 13 inji, cabbirkana waxaa lagu hagaajin karaa iyadoo loo eegayo cabbirka madaxaaga. Qalabka laba-lakabka ah: Naqshadaynta dharka laba-lakabka ah waxay si fiican u duubi kartaa timaha, markaa ka dib markaad isticmaasho maaskarada timaha, ma wasakhayn doontid xaashida markaad seexanayso. Satin...
Amazon Hot Iibinta Gaarka ah Summada caadadii poly satin bonnet
Koofiyada satin ee noocan oo kale ah ayaa ah mid jilicsan oo ku filan si uu u daboolo dhammaan cabbirrada madaxa iyo timaha Noocan noocan oo kale ah ee satin ayaa ah mid dabacsan oo ku filan inuu daboolo dhammaan cabbirrada madaxa iyo timaha. Waxay labanlaabmi kartaa daryeelka timaha, daboolkuna wuxuu yarayn karaa daadashada timaha. Koofiyadda satin waa mid aad u raaxaysan oo timaha ilaalin kara. Si aad ugu fududaato in timuhu gudaha u galaan, waxaad ku xidhi kartaa gunti dabacsan timaha, waxaad xidhi kartaa daboolka, ka dibna timaha rux si aad u furto guntinka, si ay timuhu si dabacsan ugu dhacaan daboolka hurdada. Ku haboon f...
Jumlo Raaxo Satin ah oo dumarka lagu hagaajin karo timaha
Koofiyada satin ee noocan oo kale ah ayaa ah mid jilicsan oo ku filan si uu u daboolo dhammaan cabbirrada madaxa iyo timaha Noocan noocan oo kale ah ee satin ayaa ah mid dabacsan oo ku filan inuu daboolo dhammaan cabbirrada madaxa iyo timaha. Waxay labanlaabmi kartaa daryeelka timaha, daboolkuna wuxuu yarayn karaa daadashada timaha. Timaha satin waa mid aad u raaxaysan waxayna ilaalin karaan timaha. Si aad ugu fududaato in timuhu gudaha u galaan, waxaad timaha ku xidhi kartaa gunti dabacsan, koofiyad xidhi kartaa, ka dibna timaha rux si aad guntiga u furto, si timuhu si dabacsan ugu dhacaan daboolka hurdada. Ku haboon...
Cabbirka Jilicsan ee Adag ee Laba Jibbaaran Balaadhan timo Bonnet Satin leh Midab gaar ah oo Scarf Edge ah
Koofiyada daboolka daboolan ee poly satin tayo sare leh oo tayo sare leh: Waxaa lagu talinayaa timaha qalalan, maaha timo qoyan ama dufan leh. Koofiyadahayadu waxay ka samaysan yihiin satin premium waxaana lagu heli karaa midabyo iyo qaabab qurux badan; ku dhaqidda biyaha waxay ka dhigi doontaa midabka sabeynaya inuu ka soo baxo dusha sare ee dharka. Sidaa darteed, ka dib markaad hesho koofiyadda satin, ku dhaq biyo qabow ka hor intaadan xidhin mana libdhi doono. Astaamaha koofiyada satin bonnet ee leh xargaha laastikada khafiifka ah iyo xargaha sawirka: koofiyadda satin-keena waa e...
Jumlada Custom Satin Hair Bonnet Haweenka Lakabka Lakabka Bonnets
Ku saabsan shaygan. Qalabka raaxada iyo tayada sare leh Koofiyada xariirta ah waxay ka samaysan tahay 100% fiber satin oo u jilicsan sida xariirta mulberry. Waxay ku darsataa shaqada biyuhu, taas oo si wax ku ool ah uga hortagi karta satin-biyoodka inay soo galaan. Ka ilaali timahaaga inay qoyaan marka aad maydhayso. Naqshadaynta lakabka labajibbaaran: koofiyaddan satin waxa ay leedahay nashqad labajibbaaran oo si fudud madaxa iyo timaha ugu habboon, sida timaha dabiiciga ah, timaha dheer, timaha curdan, timaha, timaha, toosan, dreadlocks, dabada. Koofiyadda xariirta ah ee jilicsan oo siman waxay kaa dhigi kartaa hurdo ...
jumlo caadadii bonneets Satin bonnets iyo timaha satin duubo bonnets naqshadeeye
Ku saabsan shaygan Qalabka iyo Astaamaha: 100% poly satin. Sida shaqada iyo qaabka satin, isticmaalka ka samaysan satin ayaa u fiican maqaarka iyo timaha marka aad seexanayso. Waxay yaraynaysaa is jiid jiidka waxayna ka tagtaa maqaarkaaga iyo timahaaga qoyaan, taas oo ah furaha yaraynta timaha jebinta, sariirta, darafyada dillaaca iyo maqaarka engegan. Waxyaalaha tayada sare leh: Naqshadaynta dharka labajibbaaran waxay si fiican timaha u duubi kartaa, ka dib markaad isticmaasho maaskarada timaha, ma wasakhayn doonto go'yaasha markaad seexanayso, midab ma yeelan doonto oo ma joogsan doonto ...
warshad loo habeeyey bonnets waaweyn oo satin ah oo loogu talagalay haweenka koofiyadda timaha hurdada
Ilaali curlskaaga Habeenkayagu waa hab la moodi karo oo timahaaga lagaga ilaalinayo inay jabaan. Marka aad rogrogto oo aad habeenkii jeedsato, waxay yarayn karaan jebinta timaha iyagoo yaraynaya is jiid jiid. ● Madaxa jilicsan: beanie wuxuu ka samaysan yahay laba maro, xuubka waa 95% polyester + 5% spandex satin, lakabka sarena waa satin jilicsan. saameyn aan simbiriirixan lahayn. ● Naqshadaynta laba lakab:...
Cinwaanka:No 88 Xingwang Street, Shengzhou, Shaoxing, Zhejiang, Shiinaha